SAWIRRO: Ciidanka dowlada oo joojiyay dagaal beeleed dhiig ku daatay. – Kismaayo24 News Agency
by admin 15th September 2019 073
Ciidanka dowlada Soomaaliya gaar ahaan milatariga iyo Nabad sugida ka howlgala gobolka Galgaduud ayaa ku guuleestay in ay kala dhax galaan labo maleeshiyo beeleed oo dagaal ku dhax marayay deegaano hoostaga degmada Balanbale.
Ciidamada milatariga qeybta 21-aad iyo ciidamo katirsan nabad sugida ayaa gaaray degmada Balanbale iyo sidoo kale deegaanada ay ka dhaceen dagaal beeleedka ee Oodaale iyo Xersi Lugeey.
Saraakiisha ciidankan gaaray degmada Balanbale ayaa kulan la qaatay waxgaradka degmadaasi gaar ahaan kuwa dagaalka u dhaxeeyo, waxa ayna ku wargaliyeen in aan la aqbali karin in mar kale soo laabtaan dagaal beeleed dhiig ku daato.
Odayaasha labada dhinac ee la kulmay saraakiisha ayaa soo dhaweeyay dadaalka ciidanka dowlada, waxa ayna Odayaasha soo dhaweeyeen in ciidanka dowlada ka howlgalaan degmada Balanbale si ay uga hortagaan dagaal beeleedyada.
Degmooyin iyo deegaano katirsan gobolka Galgaduud ayaa mudooyinkii dambe waxaa kusoo noq noqday dagaal beeleed u dhaxeeya dad wada degan halkaasi, waxa ayna inta badan dagaaladan salka ku hayeen muran ka dhashay ceel biyood iyo daaqsin.
DEGDEG: Goob uu khudbad ka jeedinayey Kheyre oo bam lagu weeraray.
Dhagayso: Galmudug “Xoolihii ay kala dhaceen Maleeshiyaadkii Dagaalamay waan ukala celinay”.
Maqaamka Muqdisho maxuu noqon doonaa? (Q 2aad)
Tifaftiraha K24 21st August 2016 21st August 2016